Windows Media Player Error ဖြေရှင်းနည်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » ဖြေရှင်းနည်းများ » Windows Media Player Error ဖြေရှင်းနည်း
By နေမင်းမောင်3:06 PM20 comments
lional February 23, 2012 at 7:06 AM
ohh !!! very nice brother. thank you so much .
lional February 23, 2012 at 7:07 AM
AZURE February 23, 2012 at 6:35 PM
Sai Nge February 24, 2012 at 9:44 PM
moe kyaw March 1, 2012 at 11:14 PM
ဗဟုသုတ တခု တိုး တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Anonymous March 4, 2012 at 11:57 AM
ညီလေးေ၇ အခုလိုမသိတာလေးတွေကိုစိတ်၇ှည်စွာရှင်းပြလို့အထူးကျေးဇူးတင်တယ်ကွာ..
ပို့ တခုေ၇းပီးတိုင်း လုပ်နည်းလေးကို ပါ Pdf နဲ့ ဖြစ်၂ အဆင်ပြေရင် ပေါင်းတင်ပေးပါလားကွာ
နက်မ၇တဲ့နေ၇ာတွေေ၇ာက်ရင် မေ့သွားရင် ကိုယ်တို့ ပြန်ဖတ်ပြီးလုပ်၇တာအဆင်ပြေအောင်ပါ
ွှThank you very much.
win March 19, 2012 at 12:32 PM
Anonymous March 29, 2012 at 4:31 PM
ကိုလမင်းရေ( နေမင်းဆိုတာ )ပူသလားလို့ ခုဟာကအေးမြတဲ့ နည်ပညာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ ဆိုဒ်လေးဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်လွန်းလို တင်းစားခေါ်ကြည့်တာပါ မှားသွားရင်ခွင့်လွတ်ပါဂျာ ...တိန်.ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဒီထက်မက နည်းပညာတွေ တိုးပွားပြီးတော့ ခုလိုပဲမျှဝေခံစားရင်းနဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းမြေ့သော ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ...
fans May 9, 2012 at 5:12 PM
အစ်ကို နေကောင်းကျန်းမာ.. အိတ်ဖောင်းဝမ်းသာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဆန္ဒပြုဆုတောင်းရင်
Microsoft Word လေးနဲ့ သယ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ....
min min July 20, 2012 at 1:41 AM
Anonymous November 25, 2012 at 6:13 AM
ကျွန်တော်တော်တော်ကံဆိုးတာပဲ . .
လင့်တွေကဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့မရတေ့ဘူးဗျ .... :(
ရ နောင်း February 8, 2013 at 11:59 PM
အကိုရေ ကျွန်တော်အကိုပြောအတိုင်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ မရလို တစ်ချက်လောက်ကူညီပါဦး
အခုလိုပညာဖြန့် ဝေပေးတဲ့အတွက် နောင်ဘဝမှာဒီထက်မက ပညာထူးချွန်ပါစေ
thanksalot bro!.............